Dr Randriamiarisoa Joseph “Fanjakana malemy amin’ny lafiny maro no misy eto”
Tsy azo inoana ny ahatanteraka ny Drafitra PEM (Plan Emergence de Madagascar) sy ny IEM hoy ny Dr Randriamiarisoa Joseph mpikambana ao amin’ny Antoko Politika UNDD.
Tsy misy hevitra ijoroana sy mari-pototra akory ny mpitondra ankehitriny hoy ny tenany. Tsy ho vanona izany ny toekarena raha tsy tsara fototra ny Fanjakana mijoro. Tsy ahitana izany mihitsy mantsy ny fanjakana misy amin’izao fotoana izao hoy hatrany ny tenany. Na ny fandaminana atao eto aza tsy misy fotony ary kitoatoa avokoa na ireo heverina ho fototry ny toekarena tahaka ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Ankoatr’izay dia tsy mahay mijery ny laharam-pahamehana ny mpitondra. Raha tsy hiteny fotsiny ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary ireo tsy mianatra marobe eto Madagasikara izay tokony hatao vain-dohan-draharaha ny fampidirana azy ireny an-tsekoly sy ny fanamboarana EPP. Tahaka izany ihany koa ny sehatra fahasalamana izay mitotongana hatrany ary tsy misy fivoarana mihitsy. Mampahalemy ny fanjakana ihany koa ny fahavitsian’ireo mpiasam-panjakana manao ny andraikitra hoy Dr Joseph. Raha ny eto amin’ny firenena dia fonksionera 8 no miandraikitra olona miisa 1000. Any amin’ny tany mandroso anefa dia miisa 90 farafahakeliny ny mpiasam-panjakana miandraikitra olona 1000 izany.
Ilaina ny fanaovana Audit ny CENI
Betsaka loatra ny kitoatoa sy ny tsy fahaiza-manao nisy teo anivon’ny CENI ary mampametra-panontaniana mihitsy ny amin’ny fomba fiasa natao tao. Ny fifidianana no fototry ny demokrasia sy ny fanjakana nefa tsy nandeha tamin’izay laoniny. Izany rehetra izany no efa mahatonga ny mpifidy ho kamo. Nanambara araka izany ity mpikambana ao amin’ny UNDD ity fa tokony atao ny Audit tamin’ny asa nataon’ny CENI na tamin’ny fomba fiasa ankapobeny na ny ara-bola satria tsy nahavita ny asany io vaomiera io. Amin’izao ihany koa dia tsapa fa tsy mari-pototra ary tsy mety ny fototra nametrahana ny CENI ka tsy azo atokisana io voamiera io. Vokatr’izany dia tsy azo atokisana ny voka-pifidianana rehetra nataony. Diso hatrany am-boalohany mihitsy tamin’ny famoronana ny CENI ary izany no ilàna ny fihavanam-pirenena izay takian’ny UNDD hatramin’izay mba tsy hiverina intsony ny krizy tahaka izao.